लोक दोहोरीका राजा राजु परियारले आजसम्म कति कमाए त?
काठमाडौ । आफ्नो उमेरको ९ वर्ष देखि गीत गाउँदै गरेका राजु परियार लोक दोहोरीको राजा भने पनि हुन्छ । उनलाई दर्शक र श्रोताले दोहोरीको किंग भनेर सम्बोधन गर्छन । उनी निकै सरल र शालिन शैलिले दोहोरी गाउँछन् । उनीसंग गीत सार्वजनिक गर्न पाउँदा नयाँ कलाकारले आफुलाई भाग्यमानी सम्झन्छन् । उनले पनि मन पराएका कलाकार भने टिका सानु, टिका पुन लगायतका छन् । अहिले पछिल्लो समय आएका कलाकारहरु पनि निकै राम्रो भएको बताएका छन् ।
उनले आफुले कसैलाई बोकेर सांगितीक क्षेत्रमा भने नल्याएको बताएका छन् । पछिल्लो समय केही कलाकारहरुले नयाँ प्रतिभाहरुलाई पनि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । तर राजुको जिवनमा भने त्यस्तो कोही नभएको बताएका छन् । प्रतिभा भएर पनि आर्थिक हैसियत नभएकाहरुलाई आफुले निकै सहयोग गरेको भने बताएका छन् । उनले पछिल्लो पुस्तामा भाइरल भन्ने शब्द प्रचारीत भएकोमा त्यो शब्द मात्र भएको बताएका छन् ।
अरुका लागि राम्रो हुन्छ भने त्यसका लागि अचानो बन्न भएको बताएका छन् । उनले मधु क्षेत्री र खेम सञ्चुरीकोबीचमा भएको विवादका विषयमा पनि केही प्रतिकृया दिएका छन् । उनीहरुको नाम नलिएर उनले लगानीकर्ता भन्दा सर्जक ठूलो भएको बताएका छन् । उनले सर्जकले सिर्जना नगरिदिए लगानीकर्ताले लगानीको ठाउँ नपाउने बताए । ९ वर्षको उमेर देखि गीत गाउन थालेका राजु परियारले कति कमाए भनेर प्रश्न गर्नेलाई निकै सटिक जवाफ दिएका छन् ।
उनले भने, केलाई कमाई भन्ने ? आत्मसन्तुष्टि कमाएको छु । गाडी किनौं भने काठमाडौमा पार्किगं छैन । काठमाडौमा अहिले सम्म छानी छानी बस्न पाइएकै छ । त्यसैले त्यसको महशुष गरेको छैन । दिन आएपछि सबै कुरा हुन्छ । बालबच्चाको पढाई र आफ्नो जिवन यसैवाट चलेको छ ।
बलिउड अभिनेता अर्जुन रामपालको घरसम्म छापा,ड्राइभर पक्राउ
के श्वेता खड्काको विवाह हुदै छ ?यस्तो छ वास्तविकता
माफी माग्दै भिटेनले भने नयाँ गीत ‘पारा’ संशोधनपछि पुनः रिलिज हुन्छ